Ahoana no hampivoaran'ny PPC ny varotra miditra | Martech Zone
Ahoana no hampivoaran'ny PPC ny varotra miditra
Talata, Novambra 19, 2013 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Jenn Lisak Golding
Iray amin'ireo resadresaka lehibe mitranga ankehitriny ny fomba fizarana ny volanao amin'ny ezaky ny varotra miditra anao. Ireo mpivarotra, amin'ny salan'isa, dia mampiasa tetika 13 mahery amin'ny paikadin'izy ireo hisarihana fitarihana vaovao (loharano: Content Marketing Institute), ao anatin'izany ny infografika, ny fitorahana bilaogy, ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka, ny horonan-tsary, sns ... Ka ahoana no ahitantsika hoe aiza no hampiasana azy io ary ohatrinona no holaniana?
Ny paikadin'ny marketing anatiny dia toa samy hafa amin'ny orinasa sy ny indostria tsirairay. Miovaova ihany koa ny teti-bola. Saingy ny ampahany lehibe amin'ny paikady marketing miditra rehetra dia ny fampiasana ireo loharano azo arak'izay azo atao mba hiteraka fitarihana mahay. Tetika iray izay tena mampiseho valiny dia karama isaky ny tsindry (PPC), ary mamporisika ahy hampiditra an'ity paikady karama ity bebe kokoa isan'andro.
Ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifako dia ilaina ny fampielezan-kevitra mandoa isan-tsindry ary miasa izy ireo. Fa maninona Satria miara-miasa amin'ny anay izahay Mpiara-miasa PPC, EverEffect, ary ny mpanjifanay:
ampiarahina amin'ny fitambarana teny lakile mifandraika (organika sy karama) ho an'ny fampielezan-kevitra PPC
mandany fotoana amin'ny famaritana ny fomba hampihenana ny vidiny isaky ny fahazoana (CPA)
manokana teti-bola ho an'ny fampielezan-kevitra PPC isam-bolana
Raha atao teny hafa, miasa ny PPC, saingy mila fotoana vao tena hanehoana ny valiny, toy ny tetika marketing mahomby hafa.
Ampahany amin'ity fizotrany ity ny famaritana izay teny lakile miasa ho an'ireo mpifaninana ary manana fahatakarana tsara kokoa ny tontolon'ny fifaninanana. Niara-niasa tamin'ny Ispionage izahay, lehibe fitaovana marketing amin'ny fikarohana, hamoronana infographic momba ny fomba ahafahan'ny fampielezan-kevitra PPC manatsara ny paikadim-barotra miditra. Teny an-dalana dia nahita statistika tsara izahay momba ny antony iasan'ny PPC ho an'ny olona rehetra manomboka amin'ny magazay Mom & Pop ka hatramin'ny orinasa lehibe (ary maninona ny Ispionage no manamora ny fampielezan-kevitra).
Tags: paikady marketing anatybarotra tetikafampielezana karama isaky ny kitihofanentanana ppcSearch Marketing
Fitsipika 21 momba ny paikadin'ny haino aman-jery sosialy mahomby
Mar 9, 2014 ao amin'ny 11: PM PM
RDM dia manao audit Adwords PPC maimaimpoana, miantso azy ireo fotsiny amin'ny 256-398-3835
Mar 20, 2014 ao amin'ny 6: PM PM
Niresaka tamin'ny orinasa PPC marobe aho, fa ny zava-dehibe indrindra azonao atao amin'ny fampielezankevitra ara-barotra anao dia ny pejy fandraisana. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mivarotra anao zavatra tokana 1 toa ny famolavolana tranonkala, na ny Google Adwords fotsiny, na ny popup fotsiny, na ny famerenam-bidy fotsiny sns. Tena mampihoron-koditra tanteraka izany satria na dia zavatra 1 aza no mety hampiova hevitra amin'ny fampielezana varotra marimaritra iraisana, tsy misy singa tokana dia singa iray manamboatra na manaparitaka ny varotra an-tserasera, mila ny fonosana rehetra ianao ary avy eo manandrata / manatsara avy ao. Nitombo mihoatra ny 60% ny vola miditra amin'ny orinasako tao anatin'ny roa volana raha vao nifidy masoivoho tsara nanao mihoatra ny PPC fotsiny aho, fa nanao ihany koa ireo pejin-tsaiko, famerenana ny saiko, doka amin'ny banner, sns. Raha ny tena izy dia nahazo ny nomeraon-telefaonin'i Simon eto aho, afaka miresaka aminy koa ianao. Antsoy fotsiny izy amin'ny 325-446-1507.